Wasaaradda waxbarashada XFS oo maamulka G/Banaadir ku wareejiyay waxbarashada caasimadda - Tilmaan Media
Wasaaradda Waxbarashada ee Xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maamulka waxbarashada ee caasimadda Muqdisho kuwareejisay maamulka gobolka Banaadir.
Xaflad si qurux badan loo soo agaasimay ayaa waxaa kasoo qayb galay kusimaha raysalwasaaraha dalka Mahdi Guuleed, wasiirka waxbarashada Goodax Barre iyo Gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo wasiirka waxbarashada aya labaduba xafladda ka sheegay in wareejinta maamulka waxbarashada ay wax katari doonto hormarinta tayada tacliinta ee gobolka Banaadir.
Sii hayaha Ra’iisul Wasaaraha dalka, mudane; Mahi Maxamed Guuleed oo guul weyn ku tilmaamay daadejinta maamulka waxbarashada, ayaa maamulka gobalka kula dardaarmay in sida ugu haboon ay uga soo dhalaalaan mas’uuliyadda maanta lagu wareejiyay.
sida uu qabo dastuurka Soomaaliya, maamulka waxbarashada dalka ayaa ah mid ay wadaagayaan labada qaybood ee dowladda, oo kala ah dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah.
Afgaanistaan: Dowladda oo sii daynaysa 400 oo maxbuus oo katrisan Taalibaan